Jereo ny tanàna katedraly taloha any Kildare ao amin'ny County Kildare mahafinaritra. Mifanena amina soavaly mitaingina soavaly tsara tarehy ao amin'ny National National Stud-na Irlandey na mandehandeha mamaky ny zaridaina japoney milamina. Miakatra amin'ny tilikambo boribory 1,000 taona hahitana fahagagana na mitsidika ny Katedraly St Brigid. Amin'ny alina, midira ao amin'ny afovoan-tanàna velona ary zahao ireo menaka cocktail tsara tarehy any amin'ireo bara fisoka, alohan'ny handihizana amin'ny alina tsy misy azy.
Ny tanànan'i Kildare dia nanomboka tamin'ny 5th taonjato ary naka ny anarany avy amin'ny Gaelic, Cill Dara izay midika hoe Church of the Oak, ilay monasitera natsangan'i St Brigid teo amin'ilay toerana teo ambanin'ny hazo terebinta. Manankarena amin'ny lova sy ny tantara ary ny tanàna tany am-boalohany ny tanànath taonjato maro Market House dia manolotra topy maso ny lasa tamin'ny alàlan'ny traikefa virtoaly lalina, teboka fanombohana tsara ho an'ny fitsidihanao. Eo akaiky eo ny Katedraly St Brigid sy ny Tilikambo Boribory - eo akaikin'ny 33 metatra ny haavon'ny tilikambo ary io no tilikambo boribory avo indrindra azo zakaina any Irlandy, azonao antoka fa hahita fahitana tsara momba ny tanàna sy ny Lemaka Curragh ianao. St Brigid's Well dia mandeha tsy lavitra ary ny fitsidihana an'i Solas Bhride Hermitages no hitantara ny tantarany. Ny hazakazaka moto iraisam-pirenena voalohany natao tany Angletera na Irlandy, ny Gordon Bennett Cup, dia nandalo an'i Kildare. Amin'ny vanim-potoana maoderina kokoa, ny tanàna dia toeran'ireo mpivarotra fivarotana mitsidika an'i Kildare Village ary mandritra ny andro fialantsasatra ao amin'ny National National Stud and Gardens malaza any Irlanda.
Top fahitana any Kildare
Toeram-pambolena sy fiompiana miasa any an-tranon'ireo zaridaina japoney malaza, St Fiachra's Garden ary Living Legends.
Ny ankizivavy Te-hiala voly fotsiny…. Kildare Style !!
Legends an'ny fitsangatsanganana zava-misy virtoaly any Kildare
Killinthomas Wood: Ity ve no làlan'ny natiora tsara indrindra any Irlandy?
Jereo bebe kokoa ao Kildare
Lova sy tantaralalana
Kildare mpitaingin-tsoavalyManohana any an-toerana
Adventure sy hetsikaManohana any an-toerana
Pubs & NightlifeSakafo mahazatraHotelsMpinamana
Lova sy tantaraLakozia kely
OutdoorsFianakaviana ankohonanytrano fisotroana kafe
fiantsenanaAndro oranatrano fisotroana kafe
fiantsenanatrano fisotroana kafeHotelsBudget